प्रधानमन्त्रीज्यू, वार्षिक बजेट बराबर व्यापार घाटा बोकेर कसरी बन्छ ‘समद्ध’ नेपाल ?
नेपालको ‘आर्थिक क्रान्ति’ ! २०७४-७५ को व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब, आयात १२ खर्ब, निर्यात ८१ अर्ब
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । केही दशकदेखि ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला गम्भीर मोडमा पुगेको छ, धसिएको छ ।
अर्थविद्हरु यसलाई ‘हिलोमा फसेको गाडी’ लाई जसरी ‘किक स्टार्टले मात्रै नपुग्ने बरु बिग पुस नै चाहिने’ बताउँछन् ।
तर, माथि उकास्नु पर्ने बेला सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को ‘डिफेन्सिभ’ बजेट ल्याएपछि अर्थतन्त्र झनै ओरालो लाग्ने आलोचकहरु बताउँछन् ।
दैनिक रुपमा गिरिरहेको बजारका ‘इन्डिकेटर’हरुले सरकारलाई यो लाज छोप्ने ठाउँ पनि दिएको छैन ।
सरकारले दैनिक गाडी चढेर यातायात गर्ने जनताका नाउँमा समेत थप करको भार बढाएर ‘सरकार हुनुको अनुभूति’ गराएको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको ‘प्रत्याभूति’ नै यही हो जस्तो गरी जनताले करको भारी मात्रै हैन जन्मने बित्तिकै ऋणको भार दिनप्रतिदिन बढोत्तरी रुपमा खेपिरहनु परेको अवस्थामा नेपालबाट स्विस बैंकमा पैसा राख्नेहरु भने गत केही वर्षभित्रै ४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको नारा जपिरहने सरकारको कार्यशैली भने अर्थतन्त्रको भाषामा ‘दिनभर इँटा बोकेर उभिरहे’ झैं भएको छ, जसलाई अर्थशास्त्रले उपलब्धि मान्दैन ।
लोकतन्त्रको ‘प्रत्याभूति’ नै यही हो जस्तो गरी जनताले करको भारी मात्रै हैन जन्मने बित्तिकै ऋणको भार दिनप्रतिदिन बढोत्तरी रुपमा खेपिरहनु परेको अवस्थामा नेपालबाट स्विस बैंकमा पैसा राख्नेहरु भने गत केही वर्षभित्रै ४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ
सरकारको आर्थिक सक्रियता, सुशासन र व्यवस्थापन चुकेको प्रमाण खोज्न उदाहरण अरु के दिनु पर्छ र ! उसको शैलीले न त निजी क्षेत्र तुष्ट छ, न सरकारले नै अर्थतन्त्र उकास्ने नयाँ विकल्प अघि सार्न सकेको छ ।
बजेट घाटाः गत आवको तुलनामा २७.५३ प्रतिशले बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७ दशमलव ५३ प्रतिशले बढेर व्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा व्यापारघाटा ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ४ हजार रुपियाँ रहेको थियो । यो वर्ष व्यापार घाटा २ खर्ब ५१ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
तुलना: आयात निर्यातमा !
गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड २१ लाख १८ हजार रुपियाँ वस्तु आयत भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा ८१ अर्ब १९ करोड १६ लाख ५२ हजार रु रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को तुलनामा आयात २६ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा ९ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड २९ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको सामाग्रीहरु आयात भएको थियो ।
निर्यातमा झिनो सुधार !
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यातमा पनि केही सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ दशमलव १७ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७३ अर्ब ३ करोड ६२ लाख ४४ हजार रुपियाँको सामाग्री विभिन्न मुलुकहरुमा निर्यात भएको थियो ।
इन्धनः आयातमा सबैभन्दा अघि
भन्सार विभागकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड रुपियाँको इन्धन आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी आइरन एण्ड स्टीलजन्य सामाग्रीहरु १ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड रुपियाँको, मेसिनरी सामान १ खर्ब २४ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको, सवारी साधन ८६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको साथै विद्युतीय सामान ७८ अर्ब २८ करोड रुपियाँको आयात भएको छ ।
कफीले लियो उचाइ
यसैगरी कच्चा धागो ८ अर्ब ४३ करोड रुपियाँको, कार्पेट ७ अर्ब ३८ करोड रुपियाँको, तयारी पोशाक ६ अर्ब २८ करोड रुपियाँको आइरन एण्ड स्टील जन्य सामाग्री ५ अर्ब १६ करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ ।
खाडी लगायत मुलकमा भइरहेको मानव निर्यातलाई चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्ने हो ?
नेपालको व्यापार घाटा कुन देशसँग कति ?
सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग देखिएको छ । व्यापारका हिसाबले दोस्रो स्थानमा देखिएको चीनसँको व्यापारघाटा समेत पछिल्लो अवधिमा बढ्दै गएको छ ।
भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपियाँको सामाग्रीहरु आयात भएको छ ।
सोही अवधिमा ४६ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ५६ हजार रुपियाँको सामाग्रहरु भारततर्फ निर्यात भएको छ ।
व्यापारका हिसाबले दोस्रो स्थानमा देखिएको चीनबाट यस अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ३ लाख १६ हजार रुपियाँको आयात भएको छ भने २ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपियाँको मात्रै चीनतर्फ निर्यात भएको छ ।
भारत, चीन पछि फ्रान्स
व्यापारका हिसाबले फ्रान्स युएईलाई उछिन्दै तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ ।
यस अघि चौथो स्थानमा रहेको फ्रान्सबाट गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ८३ करोड ६२ लाख ७० हजार रुपियाँको सामाग्रीहरु आयात भएको छ ।
फ्रान्सतर्फ निर्यात भने यस अवधिमा १ अर्ब २२ करोड ५५ लाख २ हजार रुपियाँ देखिएको छ ।
१३ औंबाट चौथो स्थानमा भियतनाम
भियतनामतर्फको आयात भने ह्वात्तै बढेको छ । व्यापारघाटाका हिसाबले अघिल्लो वर्ष १३ औं नम्बरमा देखिएको भियतनाम यस वर्ष चौथौ स्थानमा उक्लिएको छ ।
यस अवधिमा भियतनामबाट १३ अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको सामाग्री आयात हुँदा ६१ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै सामाग्रीय त्यसतर्फ निर्यात भएको छ ।
युएईमा बढ्यो निर्यात !
अघिल्लो वर्षको तुलनामा युएईतर्फ भने निर्यात बढेर आयात घटेको छ । अघिल्लो वर्ष व्यापारघाटाका हिसाबले तेस्रो नम्बरमा रहेको युएई नेपालबाट निर्यात बढेसँगै ५ औं नम्बरमा पुगेको छ ।
यस अवधिमा युएईबाट १३ अर्ब २१ करोड १७ लाख १७ हजार रुपियाँको आयात हुँदा १ अर्ब ७२ लाख ३६ हजार रुपियाँको सामाग्री निर्यात भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष १० करोड ४ लाख ५९ हजार रुपियाँको मात्रै नेपालबाट युएईतर्फ निर्यात भएको थियो ।
सरकारी स्रोत र मिडिया एजेन्सीको सहयोगमा